5 Akụkụ nke arụmọrụ arụmọrụ arụmọrụ | Martech Zone
Kemgbe ihe karịrị afọ iri, anyị ahụla ọrụ ịre ahịa na-enyere aka nyochaa ma mepụta usoro azụmaahịa na ezigbo oge na nzukọ. Ọ bụ ezie na onye isi oche na-arụ ọrụ na atụmatụ na uto ogologo oge, arụmọrụ ahịa na-adịkwu nkọ ma na-enye nduzi na nkuzi kwa ụbọchị iji mee ka bọl ahụ na-aga. Ọ bụ ọdịiche dị n’etiti onye isi nchịkwa na onye nchịkwa iwe.
Gịnị bụ Ọrụ Azụmaahịa?
Site na ọbịbịa nke usoro ịre ahịa azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa, anyị ahụla ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ na njikwa njikwa ahịa. Ngalaba ahịa na-ejupụta na akụrụngwa, na-arụ ọrụ na njikarịcha na mmepụta nke ọdịnaya, mkpọsa, na atụmatụ ndị ọzọ. Dị ka Nadim Hossein nke BrightFunnel dere otu afọ gara aga:
Dika ahia na eri karia ahia ahia, teknụzụ ndi a di na etiti. Nke a pụtara na ọrụ azụmaahịa na-aghọ ọrụ dị oke mkpa - na-agbanye onwe ya na nkwụsị ahịa nchịkọta na usoro mkpebi na usoro ị nweta ego.
David Crane na ndi otu ndi mmadu jikota tinyere onu ihe omuma a Egwuregwu Arụ Ọrụ Ahịa, na akụkụ 5 dị oke mkpa nke na-eme ka arụmọrụ ahịa rụọ ọrụ kacha mma.
Gịnị Na-eme Ka Marketingrụ Ọrụ Successga nke Ọma?
Mgbanwe ahịa - Azụmaahịa Ahịa ga-arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị otu niile dị n'akụkụ ijikwa njikwa ngwaọrụ na teknụzụ nke na-akwado usoro ahịa na azụmaahịa Naanị 24% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na enwere mmekọrịta dị mma n'etiti ahịa na ahịa.
Ngwakọta usoro - Ọrụ ịre ahịa na-ahụ maka sistemụ na ngwaọrụ niile metụtara ga-eme ka nkwukọrịta ndị ahịa kwalite. Aga m agbakwunye na ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ịbụ otu echiche nke ndị ahịa na-akọrọ ebe niile. Naanị 33% nke ụlọ ọrụ ndị na-eji #CRM na Ahịa #Automation kwuru na ejiri ha abụọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ogo data - Ọrụ ịre ahịa ga-adị uchu n'ịbịaru ịdị ọcha data na ịba uru nke nzukọ. 25% nke ọdụ data ahịa B2B ezighi ezi na 60% nke ụlọ ọrụ nwere data enweghị ntụkwasị obi.
Ebute ọsọ - A na-ebo ndị na-ere azụmaahịa ebubo na ha na-ebu ndị ahịa ahịa data na data achọrọ iji jeere atụmanya ahụ ọsọ ọsọ. 30 ka 50% nke ahịa na-aga onye na-ere ahịa nke zara ya na mbụ.
Nnwale na nchịkọta - Dika ike teknụzụ azụmaahịa na-abawanye, a ga-atụba data ndị ọzọ n'ime nzukọ. Nke a ga-achọ mmadụ iji kwado nghọta nke nzukọ a banyere arụmọrụ ahụ. Ahịa nchịkọta eme atụmatụ mmefu ego iji mụbaa 84% na afọ 3 sochirinụ.
Tags: ogo datajikọtandu ọsọitinye n'ọnọdụ ahịanchịkọta ahịaahia kacha mmaahịa mmeshoarụmọrụ ahịaarụmọrụ ahịa ahịa kacha mmaahịa opsahịa ops kacha mmaarụmọrụ ahịaitinye n'ọnọdụ ahịamwekota usoronhazi usoro